မိူင်းဝေေ၀ တောင်တန်းက အဆင်း…………………. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Local Guides » မိူင်းဝေေ၀ တောင်တန်းက အဆင်း………………….	33
မိူင်းဝေေ၀ တောင်တန်းက အဆင်း………………….
Posted by ko pauk mandalay on Jul 16, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 33 comments
1 စိမ်းစိုသောတောင်ကြားမှာ တောင်ခုိးတွေမိူင်းဝေ
2 တောင်တန်းတွေကြားက တိမ်းခိုးမိုးငွေ့
5 မိုးတိတ်တော့ စိမ်းစိုတဲ့လယ်ကွင်းတွေမြင်ရတော့ အေးချမ်းပါတယ်
7 မိုးထဲမှာ မတ်မတ်ရပ်နေတဲ့ထင်းရူးတော
8 မိုးအောက်မှာ ကုပ်ကုပ်လေးငြိမ်နေတဲ့ တဲ့ကလေး
9မိုးထဲလေထဲ မသွားလဲမရ10လမ်းမှာထမင်းစားနားတဲ့ဆိုင်ဘေးက အကြော်ဆိုင်12 မိုးထဲလေထဲဈေးသည်12ထမင်းစားနားတဲ့ဆိုင် 13 အိုလွမ်းဘွယ်……………………………….14လမ်းအမြင်ဆန်းဆန်း15 အဆင့်ဆင့်လိပ်တက်နေတဲ့ တိမ်တောင်တွေ16 စိတ်တွေတောင်အဝေးလွင့်သွားသလိုလိုိ About ko pauk mandalay
မမ အညာသူ says: အရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ
အန်ကယ်ပေါက်ရဲ့ ရိုက်ချက်ကတော့ တကယ်ကိုအသက်ဝင်တယ်
water-melon says: ဝေးလွင့်နေတဲ့တိမ်
စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဒီမိုးများ ရွာနေတုန်း
အကုန်လွမ်းတယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1658
aye.kk says: တောင်တန်းတွေကြည့်ပြီး….
မောင်ပေ says: မလွမ်းချင်သေးဘူး
aye.kk says: ပြတ်တုံးလပ်တုံး…
မောင်ပေ says: ကျုပ်ကောင်မလေးက အခုမှ ၂၃ မို့ ရယ်ပါ
aye.kk says: အမြန်ရအောင်….
ကိုပေါက်ကဂေဇက်မှာပဲတင်ထားတာ…ဆင်းမရလို့ ပါတဲ့(ခင်လို့ စတာ)၊၊၊
Was this answer helpful?LikeDislike 2243
water-melon says: ကိုပေအရင်တခါပြောတုန်းက
Was this answer helpful?LikeDislike 1252
ဘဲဥ says: လွမ်းထှာဗျာ ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိဘူး
မာမီပေါက်ကြောင့် သများ လွမ်းတတ်နေဘီတော့
mamanoyar says: ပုံတွေကြည့်ပြီး ဘယ်လွမ်းရမှန်းမသိဘူး
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says:4ပုံမြောက်မှာ ကုန်တင်ကားက ဘဇာကြောင့် ကျော်တက်နေရတာဒုံး
ပုံတွေကြည့်ပီး ချစ်တုဝေ သီချင်းလေး ဆိုတွားပါတယ်..
Ma Ei says: 1…တောင်ခိုးတွေတက်လာပုံလေး လှလိုက်တာ…
တိမ်တွေကြားထဲ ရောက်သွားသလို မို့ ပျော်ခဲ့ရဘူးတယ်…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1708
မွန်မွန် says: နံပါတ် ၁၃ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… ပုံတွေရိုက်နေတုန်းက လေးပေါက်ရော ဘယ်သူ့ကို လွမ်းနေလဲ… :P
amatmin says: တောင်.တွေ.တိမ်တွေ မြင်ရတာ နဲ့တင်..
ကျနော်လည်း ၀င်လွမ်းသွားပါသဗျ.. မူဆယ်လမ်း ဒါ့ပုံတွေ ထင်ပ လေးပေါက်ရေ..
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: မင်းပြောတော့
ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးဆို …
ခုတော့ … အို ..
ငါ့အပေါ် သွန်းဖြိုးပါတော့လားကွယ် ..
အဲ့ဂလို ရေးမိသွားပါကြောင်း …….
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8215
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါ၏
(နံပါတ် ၁၃ ပုံကို အကြိုက်ဆုံးပဲ… ပုံတွေရိုက်နေတုန်းက လေးပေါက်ရော ဘယ်သူ့ကို လွမ်းနေလဲ)
မွန်မွန်ရေ ဒီမေးခွန်းက ဆင်ဆာထိပါ၏။
pooch says: လေးပေါက် ဘယ်သူက သွားချွန်တာလဲဟင်င်င်င်……. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7057
etone says: လေးပေါက်ရေ .. ရှူုခင်းတွေက အရမ်းလန်းတာပဲ … ။
မိုးတွင်းမို့ … စိမ်းစိုပြီး .. မြူခိုးမြူငွေ့တွေနဲ့ … ဓါတ်ပုံကြည့်ရင်း ရင်ထဲ အေးစိမ့်စိမ့်ခံစားလိုက်ရတယ် … ။
တဆက်တည်းမှာပဲ မြေသင်းနံ့ မွှေးပျံ့ ပျံ့ လေးပါ ခံစားလိုက်ရတယ် …. ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2321
ko khin kha says: တိမ်ခိုးတွေနဲ့ မှိုင်းပြတော့ လွမ်းရမှာပေါ့ ကိုပေါက်ရေ။
ရိုက်ချက်လေးတွေကတော့ အမှတ်ပေးရမယ်ဆို ဂုဏ်ထူးမှတ်ထက်တောင်ကျော်ပြီး အမှတ်ပြည့်ပေးလိုက်ချင်ရဲ့။
ညလေး says: ဒီတောင်ကိုကျော်ကာ…ပြန်သွားလေတဲ.ဌက်ငယ်ရယ်……
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တောင်ပြာတွေငိုနေပြီ ခမ်းမ်ရယ် ခမ်းမ်ပေးတဲ့အလွမ်းတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်……………………..
မွန်မွန် says: အဲ..အဲ..ပေါ်လာပြီ..မဒမ်ပေါက်ရေ..လာဖတ်ကြည့်ပါဦး…. :P
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: ကိုပေါက်ရေ တောင်ပြာတွေ ကငိုပြန်ပီ နန်းရေ မဟုတ်လားဗျာ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: တောင်ပြာတွေငိုနေပြီ နန်းရယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟင် မွန်မွန်ရဲ့ဖတ်စရာမလိုဘူး အခုလောက်ဆို
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2540
အလင်းဆက် says: ကိုပေါက်ရေ..
ရှုမဆုံးနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်း….အလန်းလေးတွေ အတွက်..ကျေူးးဇူးပါ ဗျာ.။
metallic says: တိမ်တောင်ညိုပြာတွေပေါ့နော်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒီလမ်းကတော့ တကယ်ကြည်နူးစရာကောင်းပါ၏။
shwe kyi says: နံပါတ်9ပုံကိုကြည့်ပြီးလေးပေါက်ကိုစိတ်ပူမိတယ်။ လမ်းချော်နေရင်ဒုက္ခ။
ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး ငိုချင်လာသလိုပဲ ခက်ချေပြီနော်။
ရှင်းသန့် နွယ် says: ပုံတွေကြည့်ပြီး လွမ်းမိတယ် ဘယ်ကိုလွမ်းလို့လွမ်းရမှန်းသိဝူးးးးးးးးး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အဲဒါဆိုးတာဘဲ ဘယ်လွမ်းရမှန်းမသိတာ…………………….
Gipsy says: ကိုပေါက်ရေ …ရောက်ဖူးချင်လာပြီ ဗျို့…။
မနာလို သလိုတောင် ဖြစ်ချင်လာပြီ….။
ဓါတ်ပုံလေးကို မျှဝေခံစားရင်းနဲ့ ကျနော်ရှိနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေးတောင်
char too lan says: အော်……… ၀က်သချဉ်ဆိုင်ကလေးတွေ ဖွင့်မှဖွင့်ရဲ့ လားမသိဘူးနော်…
ချမ်းလိုက်ဒါ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply
Comments By Postမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - အလင်း ဆက် - Ma Maအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - padonmar - Ma Maကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - အလင်း ဆက် - TNAမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - padonmar - ko pauk mandalayသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်မိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - padonmar - black chawအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - အလင်း ဆက် - TheWinner Getprizeအတ္တဆန် - အလင်း ဆက် - padonmarလူပါး ပုလင်းထိ - Ma Ma - Ma Maယုံလား? - အလင်း ဆက် - မောင် ပေကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်မင်းပြုစားနေတဲ့ မုသားစကားလေးတစ်ခွန်း............ - အလင်း ဆက် - padauk moePassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - Ma Ma - TNAနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၄) - GaviaGirl - မောင် ပေအညာနွေ ဘယ်ဆီခန်း တောင်ညိုနေကွယ်သမ်း............. - မောင် ပေငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - padauk moe - padauk moeရာသီပိတ်ပွဲစဉ်များထဲမှ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - အလင်း ဆက်သင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ... - padauk moe - TNAပုသိမ်မြို့ ရေကြည်ဦးရပ်ကွက် ၁၃ လမ်းမှ..... - မောင် ပေနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - padonmar - Shwe Eiစံနစ်နဲ့ တိုင်းပြည်ကိုပြင်ချင်ရင် စနစ်ကို တပြည်လုံးလေ့ကျင့်ပါဝင်ရမည်။ - မောင် ပေ - Mobile13ရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - TNA - မောင် ပေbin bo..........(ဘင်ဘို) - TNA - အလင်း ဆက်“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ko pauk mandalay - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities